Jim Carrey kọwara dị ka "ụra" maka ịchụ nwoke na nwanyị nta akụkọ - ndị mmadụ - teles relay
N'oge njem mgbasa ozi ya na-agba agba iji kwalite ihe nkiri vidio ọhụrụ ya, "Sonic the Hedgehog," Jim Carrey nwere obi ụtọ na nkụda mmụọ Fans site na akara ngosi ike ya dị elu na ajụjụ ọnụ.
Otu ihe, Carrey mere ndị na-ege ntị na "Good Morning America" ​​studio na-achị ọchị n'izu gara aga mgbe ọ gafere site na mkparịta ụka nkeji atọ na Michael Strahan, n'otu oge na-akpọ ụbọ akwara ụkwụ ya na oge ọzọ makpu na ọnọdụ onye na-agbachitere ya n'ihu onye ọkpụkpọ egwuregwu bọọlụ mbụ.
Mana n'ajụjụ ọnụ abụọ n'ihu ụmụ nwanyị, onye na-eme ihe nkiri nke "Dumb and Dumber", 58, opekata mpe ihe ihere, dị ka akụkọ si kwuo.
N'oge na-adịbeghị anya, onye nta akụkọ Britain bụ Charlotte Lang, nke akwụkwọ akụkọ Heat, kọwara otú Sonic, onye bụ isi nke usoro akụkọ ọhụụ, nwere "ndepụta ịwụ".
Ọ jụrụ, "A na m eche, n'ihe niile ị mere n'ọrụ gị na ndụ gị, enwere ihe ọ bụla ka ndepụta gị bọket gị?" "
"Naanị gị," ka Carrey zara, bụ onye na-egwuri egwu na-agụsi ike na-agụ agụụ Dr. Robotnik na fim ahụ.
Mgbe Lang jiri ọchị na-aza, "Oh, wow," Carrey na-amụmụ ọnụ ọchị, "Ọ bụ ya. Emere ihe niile ugbu a. "
Lang kwuru, "Amaghị m ihe m ga-ekwu na nke ahụ."
"Enwere m ya," ka Carrey kwuru, na ọ mụmụrụ ntakịrị ntakịrị.
"Um, okay, enwere m ya ugbu a," Lang kwuru tupu ọ gafere n'ajụjụ ọzọ, nke hụrụ Carrey anya isi na ị ga-enweta $ 10 nde paycheck mgbe ọ chọrọ ka ọ merie. otu ụbọchị ego buru ibu.
Ọ bụ ezie na Carrey nwere ike iche na ọ na-elebara Lang anya nke ọma mgbe ọ na-emegharị ya, ihe ọ na-ekwu na-ewute ọtụtụ ndị na-elekọta mmadụ mgbasa ozi, dị ka Ozi kwa ụbọchị et Onwe ha.
A "nnukwu onye ofufe" nke Carrey tweeted na ọ "tufuo nkwanye ugwu" maka onye omee ahụ, ma kwuo na omume ya "adịghị anabata". Ọzọ tweeted, “N'ụzọ dị mwute, ọ na-enyo na Jim Carrey bụ oke ahịhịa akpa. "
Ajụjụ ọnụ a na-abịa mgbe a kpọrọ Carrey "mkparị", "ihere" na "ụjọ" maka iwe ya na "The Graham Norton Show" na UK na Margot Robbie, The Independent kọrọ. Ọ tụgharịrị na Robbie na-akparị na onye omekome a họpụtara Oscar nwere ihe ịga nke ọma na ụlọ ọrụ ihe nkiri n'ihi na ọ mara mma.
Ọ bụ ezie na Carrey yiri ka ọ na-enwete Robbie, o kwukwara, sị, “Ọ bụ ihe ịtụnanya na ị rụzuola ihe ị nwere na ọghọm doro anya nke anụ ahụ gị. "
“Ọ dị ịtụnanya,” ka ọ gbakwụnyere. “Ọ bụ n'ezie ihe. Ọ bụ ezigbo talent ebe a! "
Robbie chịrị ọchị n'ụzọ na-enweghị nkasi obi dị ka a ga - asị na ọ na - achọ ịkọwa okwu ahụ, mana ndị na - ekiri ya were na ntanetị gaa na mgbasa ozi na - ekwu na ha chere na mmekọrịta ya na ya enweghị nkwanye ùgwù, dịka Daily Mail na Onwe ha.
"Onwere onye ọzọ chere na @JimCarrey na-ekwu @MargotRobbie na ihe ngosi @grahnort ahụ adabaghị," gbakwunyere ozo. "Ọ bụ onye na-eme ihe nkiri dị ịtụnanya ma bụrụzie onye na-eme ihe ịga nke ọma, ọ bụrụ na ọ bụrụ nwoke na-eme ihe nkiri n'oche ya enwere m obi abụọ @JimCarrey gaara ekwu maka 'ọghọm anụ ahụ ha doro anya'"
"Kudos ya maka naanị ịchị ọchị ma were agba," onye ọzọ dere, dị ka Daily Mail si kwuo. “M gaara akụ ya ụra. "
Carrey, otu mgbe onye Hollywood kachasị akwụ ụgwọ kachasị akwụ ụgwọ, na-eme ụdị ọrụ nloghachi mgbe ọ pụtara naanị oge ọhụụ na ihe nkiri n'ime afọ iri gara aga, gụnyere na 'Dumb and Dumber' dị egwu. na 2014. O gosiputara na usoro ihe ngosi nke "Kidding," banyere omume telivishọn ụmụaka na-ekwu banyere ọnwụ nwa ya nwoke. Fraide, "Sonic the Hedgehog" ga-emepe na ụlọ ihe nkiri.
Onye omebe iwu Canada-Amerịkà amatala nke ọma na nso nso a maka eserese eserese nke Onye isi ala Donald Trump na ndị otu ndị ọchịchị ya ma tinye ha na Twitter. Mana Carrey kwuru na ya emeela ihe osise ndị a na-efe efe, gwa yahoo ntụrụndụ na o kwenyere na ndị mmadụ aghọtala ozi ya.
"Maka m, nke ahụ bụ oge… Achọrọ m ịbụ ụlọ mposi kwuru, sị, 'Hey, zere nkume. Na-aga n'oké nkume, "Carrey kwuru banyere ihe osise ya. “Anyị ka na-aga n’okwute, ma ekpebiri m na ị ga-enweta ozi m. Achọghịzi m ka m banye n'ime ya ọzọ. "
Ewezuga mgbochi tweets ya, Carrey kpalitere esemokwu n'afọ ndị na-adịbeghị anya site na isonye na enyi nwanyị mbụ Jenny McCarthy na-ekwenye na nkwenkwe ya na ọgwụ mgbochi MMR na-akpata autism. N’afọ 2015, Carrey kpọrọ onye bụbu Gọvanọ California Jerry Brown onye “onye omekome fascist” maka ibinye aka na iwu chọrọ ka ụmụaka niile nọ na steeti ahụ nwee ọgwụ mgbochi zuru oke tupu ha agaa ụlọ akwụkwọ ọha.
Ma anyanwụ kwa kọrọ na Carrey lụsoro ịda mbà n'obi ọgụ, ọkachasị mgbe ebubo ebubo igbu enyi ya nwanyị mbụ, Cathriona White, na 2015. Mana ọdachi a wetaara Carrey ọgba aghara ọzọ mgbe nne White gbara ya akwụkwọ maka ọnwụ na-ezighị ezi. . Ma, a kagburu ikpe ahụ.
Ndị Australian Canyon Resources hụrụ nrigbu nke nkwụnye ego bauxite kachasị na Cameroon site na 2022